Hay`adda caafimaadka adduunka oo baareysa cudur cusub oo ka dillaacay Shiinaha - Calanka.com
Hay`adda caafimaadka adduunka oo baareysa cudur cusub oo ka dillaacay Shiinaha
Hay`adda caafimaadka adduunka ee (WHO) ayaa shaaca ka qaaday in ay baareyso cudur cusub oo ka dillaacay dalkaasi Shiinaha kaas oo ay sanisyahanno shiineys ah heleen.
Cudurkan ayay seynisyahannadu ka heleen xoolaha qaansiirka ama doofaarka loo yaqaan, waava fayras u eg hargab oo kale.
Sarkaal ka tirsan hayadda WHO oo shir jaraa`id maanta ku qabtay magaalada Geneve`ayaa sheegay in ay si dhow ula socon doonaan fayraskaasi cusub, waxaana uu intaasi raaciyay in ay arrintaasi lagamamaarmaan tahay si looga hortago faafiddiisa.
Seynisyahano u dhashay dalka Shiinaha ayaa ogaaday in waddankaas uu ka jiro xanuun horleh oo lamid ah feyraska corona, kaas oo noqon karo cudur safmar ah sida feyraska hadda dunida ay la daala dhaceyso.
Trump oo armay in la hakiyo dhaqaalaha uu Mareykanku siiyo hay’adda caafimaadka adduunka ee WHO
Wasaaradda caafimaadka oo ka war-bixisay xaaladihii ugu dambeeyay ee cudurka COVID-19
US: Madowga Mareykanka oo u badan dadka uu ku dhacayo, una dhimanaya cudurka coronavirus-ka